WARBIXIN: Ramos, Beckham & Fàbregas oo ka mid ah xiddigaha caanka ah ee kubadda cagta kuwaasoo nolol wadaag la’ ah xaasas ka da’ weyn! – Gool FM
(World) 18 Luulyo 2019. Xiddigaha kubadda cagta ciyaara waa kuwo leh saaxiibo ama xaasas ay nolosha la wadagaan, intooda badani xiddigaha ayaa ka da’weyn gabdhaha ay la haasawaan, balse waxa jira qaar ka mid ah xiddigaha kubadda cagta oo saaxiib la’ah ama nolol wadaag la’ah gabdho da’ahaan iyaga ka weyn.
Waxa aynu warbixintaan ku eegi doonnaa xiddigaha ugu caansan kubadda cagta caalamka ee nolol wadaaga la’ah xaasas ka da’weyn oo waliba jaceylka ay u qabaan u gaarayo meshii ugu sareeysay tiyoo ay jirto ay lamanaha qaar ad la yabi doonto farqiga da’ahaan u dhaxeeya .
Warbixintaan waxaad u dhex arki doontaa magacyada lammanahan isdoortay ee da’ahaan kala weyn, sirta jaceylka ka dhaxeya, da’da ay kala weyn yihiin iyo xogta isbarashadooda ama aqal-galkooda.
David Beckham, Sergio Ramos, Cesc Fàbregas iyo kuwo kale ayaa ka mid ah xiddigaha magaca leh ee la nool xaasas ka da’ weyn.
Waxaana warixintaan inoo diyaariyay Wariyaheenna Shaafici Maxamuud Nuur (Shaafinho) ee ka daawo muuqaalka hoose.
VIDEO: Xiddigaha xulka qaranka Soomaaliya oo diyaar-garoowgii ugu dambeeyey ugu jira tartanka Chan Cup